Brand.net Martech Zone
Brand.net: Precision Geographic uye Dhata-Inotungamirwa Ratidza Kushambadzira
Chishanu, January 17, 2014 Mugovera, January 14, 2017 Douglas Karr
Nezuro ndakadya masikati neshamwari yakanaka Troy Bruinsma, mukuru wekutengesa nekutengesa. Makore akati wandei apfuura, takashanda pamisangano yakananga yematsamba yaTroy apo aishandira kambani yematare. Tichishandisa kuchenesa data, data revatengi vake, dhata ravo rekunyorera, data rehuwandu hwevanhu uye TON yebasa… isu takakwanisa kufananidza vatengi vavo varipo uye nekuona, nevemhuri, mhuri dzipi dzaive nenjere kana kushomeka kunyorera kune chaiwo tambo mapakeji kana chiteshi. Yakanga iri zano risingadaviriki!
Kurumidza kumberi uye ikozvino Troy ari kushandira Valassis, uye vakandiudza kune zvavave vachishanda paBrand.net. Brand.net ine dhijitari yekushambadzira mhinduro iyo ine unmatched rondedzero ye2,000+ inobata uye yakabatana data zvinyorwa - yakanyorwa mune imwechete ad network chikuva.
ne Brand.net, vashambadziri vanopihwa simba rekuti vasvike kune vavanotarisana nevateereri pachiyero pamhando yepamusoro, kuratidzwa kwakanyanya, vhidhiyo uye nharaunda nhare. Brand.net inogara ichidarika zvinangwa zvemushandirapamwe zvinonyanya kukosha kuvashambadziri vemakambani, zvichipa budiriro kuburikidza nekubatana pamhepo, kuziva nekutenga kunze kwenyika.
Iyo sisitimu yakanatsiridzwa zvekuti inotoputsika ikaita Ekushambadzira Targeting Zones… zvakanyanya IP kero matunhu ayo anotendera vashambadziri kuratidza kushambadza munzvimbo diki-dzakanangwa nenzvimbo. Sekutsanangura kwakaita Troy, izvi zvinogona kupa auto dealership kufananidza mutengi wavo uye kuratidza kushambadza pane akakodzera masaiti munzvimbo yavo yese yekushambadzira kunyanya kune vanhu vari kure nekwavanogara.
Wow… fungidzira izvozvo! Iyo yekushambadzira network yakagadziridzwa kuti ione, kunangisa uye kubatanidza vashambadzi kune avo akanyanya tarisiro.
Tags: ad networkkushambadzira kunongedza matunhuatzbrand.netkuratidza kushambadziranzvimbo yakanangwageographygeotargetingvalassis
Ndokumbirawo Usawira for SEO Email SPAM
Ampush: Facebook Ad Yemunharaunda Kushambadzira Platform